Puntland oo ka jawaabtay hadalkii Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo ka jawaabtay hadalkii Farmaajo
Maamul Goboleedka Puntland ayaa si adag uga hadlay hadalkii uu Golaha Shacabka ka hor sheegay Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde, ayaa sheegay in hadalkii Farmaajo ee ahaa in MW Dani uu soo qoray heshiiskii 17-ki September 2021 lagu gaaray Muqdisho isla maraana uu kor joogto ku tilmamay madaxda maamuladda kale uu yahay gaf uusan ka fiirsan Madaxweyne Farmaajo.
Farmaajo ayaa shalay Baarlamaanka ka hor sheegay in Madaxweynaha Puntland uu wax hannaan doorasho u eg madmadoobeeyay Madaxda Maamullada kalana ay daawada yaal ka ahaayeen.
Wasiir Timacadde oo maanta saxaafadda kula hadlay Dhuusamareeb ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu ka masuul ahaa burburkii shikii Dhuusamareeb, uuna diiday wax kasta oo la isugu soo dhawaan lahaa, xalka Gobolka Gedo ayuu wasiirku ku eedeeyay in Farmaajo uu dano qabyaalad u diiday.
Wasiirka Warfaafinta Puntland, mar saxaafaddu weydiisay inuu ka jawaabayo hadalkii Farmaajo ayuu yiri, “Waxay ila tahay taasi waxa ay gaf iyo ceeb ku tahay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee isugu u gafay Madaxweyneyaasha kale ee Afarta ahaa, annaga ayaana xaal ka siineyna," ayuu kaga jawaabay su'aasha la waydiiyey.